Apo makate nemati vane rumble uye kuti rinoshanda sei
Musha uye Mhuri, Zvipfuwo zvinobvumirwa
Zvipfuwo, uye kunyanya makate, ndivo vagari vemisha yakawanda: dzimba uye dzimba. Mushure mezvose, zvakanaka kwazvo, somuenzaniso, kudzoka kumba mushure mekushanda kwezuva rakaoma, kuona kuti mhuka yako yakakumirira iwe, uye kunzwisisa kuti yainetseka paanotanga kubvambura makumbo uye kunyemwerera nenzira yake. Maererano nezvimwe zvitendero, makate anodzinga midzimu yakaipa nemweya yakaipa. Uye kune avo vanovatora kumba nekuda kwechikonzero ichi. Mumwe munhu anoda kati kubata mice. Uye mumwe munhu achangoda mumwe wemhuka idzi kuti ave mumba make.
Mhuka idzi dzine unhu humwe hunoparadzanisa nevamwe - vanogona kukanganisa (purr) uye kazhinji vanoita izvi, zvichikonzera manzwiro edu nekumwemwerera. Uye zvechokwadi mumwe munhu atokumbira kanopfuura kamwechete pamusoro pokuti makate nekati vane rumb-maker. Zvechokwadi, rudzii rwekugadzira iyi, iyo iyo inoburitsa inzwi rakanaka zvakadaro?
Iwe usati watanga kudzidza zvehutano hwemhuri yekati uye ugoziva kuti zvinokonzerwa nei, zvakakosha kutaura pamusoro pokuti sei kugumburwa kunowanzoitika.
Pachiitiko ichi, pane maonero mazhinji akasiyana. Asi mushure mokunge muchidzidza zvakajairika, munogona kuuya kune mamwe maitiro ezvikonzero zvekuchenesa makate uye makati. Ndicho chikonzero nei vachiita mhere-mhere:
Zvose zvakanaka - mhuka inonzwa yakachengeteka, yakasununguka, inodziya uye yakasununguka.
Pavanenge vachida kudya uye kukumbira kuti vadye.
Panguva yekudya. Icho chiratidzo chekufarira kudya zvokudya.
Mushure mekudya semuenzaniso wekutenda.
Mukusununguka mamiriro ekutsumwa.
Kittens vanogumburwa pavanenge vachifudzwa nekati amai, vachiita kuti zvive pachena kuti zvinhu zvose zviripo.
Amai-cat inonyaradza vana vake (nenzira, inozviita kunyange pavanenge vari muchizvaro).
Iyo ikati inokura painobereka.
Kukwezva kutarisa kwemuridzi wepamusoro wekushungurudzika.
Kana uchirwara, kuzvidzivirira uye kukonzera tsitsi.
Ikati inogona kugumbusa kuratidza imwe kati runyararo runyararo
Kati - paunotya chimwe chinhu, uchiita kuti zvive pachena kuti haina kurwiswa
Apo vanofara kukuonai.
Kugadzirisa, kana chimwe chinhu chaita.
Nekubatsira kwekutamba (kutsvaga mune imwe nguva yakatarisa maruva), makati anogona kuzvibata ivo, hama uye kunyange vanhu. Hazvishamisi kuti kune chiratidzo: kana munhu achikuvadza chimwe chinhu, ipapo mhuka inorinzwa, ichave yakatarisana nechinzvimbo ichi uye "kudedera."
Zvikonzero zvekuchera makate, zvakanyanya. Ivo vose vakasiyana. Izvi zvinoratidza kuti kugumbusa chikamu chinokosha chemararamiro emhuka idzi.
Uye zvakadaro, aripi mukati nematsi, uye zvinoshanda sei? Pano hachiri mhinduro yakananga kumubvunzo uyu. Masayendisiti anoita mafungiro akawanda:
Kupembera kunowanzoitika nekuda kwekunyangarika kwemazuva. Nenzira, zvachose makate (zvisinei nokuti dzinza, zvepabonde kana zera) dzine nhamba yakafanana - 25 paminiti.
Pamusana pekukanganiswa kwemisungo ye pharynx uye diaphragm, inowanzoerekana yaitika.
Nhema dzeshoko dzenhema , dziri pedyo nezvino, dzinoita kusvitsa kunokonzera kutinhira.
Murmurk ndiwo mugumisiro wekupararira kweropa mumidziyo uye kudengenyeka mubhokisi uye kuputika kwemhuka. Izvo zvinoratidzirwa muzvitadzo zvakashata - pane zvatinonzwa zvatinonzwa.
Kune zvimwe zvakasiyana-siyana zvekuti makate nekatsi vane rumble uye kuti kunongedzera kunoitika sei:
Kuvharidzira kuburikidza nemaketani ezwi voga uye kuvhiringidzika / kupumha kwechidimbu - mweya wakasunungurwa unogadzira ruzivo rwakananga kwatiri.
Kuvharidza mahwendefa emukasi membrane iri pasi pemarara.
Kuvhiringidzika kwefupa hyoid pamwe chete nekudengenyeka kwemakumbo ezwi kunoratidzwa mukugumburwa.
Nokudaro, zvinogona kugumiswa kuti urchalnik iri munharaunda yemutsipa, larynx uye thorax, uye kugunun'una ndicho chigumisiro chezviitiko zvinoitika ipapo.
Iye zvino, achiziva pamusoro pokuti makate ane rumble uye nei, kazhinji, ivo vari kutsvaira, tinogona kutarisa zvakasiyana zvakasiyana nemhuka dzedu.
Nokuda kwechinyorwa ndinoda kutaura kuti kugunun'una kwemhuka idzi dzakanaka kunobatsira pamagadzirirwo emagetsi evanhu uye zvinowanzosimudzira kusimba kweropa, uye inewo kugadzikana uye kunonoka. Uye vana vaduku vanorara zvakanyanya nokukurumidza pasi peshoko iri rinonzwika.
Kunyange zvazvo chaizvoizvo hazvisi zvakakosha kuti uzive kuti makate nematsi ane rumbidzo, zvakakosha sei kudzidza kudzidza izvo zvatinoda zvipfuwo zvatinoda kutiudza kwatiri nekunatswa kwavo. Uye nokuda kwekutarisira kwedu uye mutsa ivo vachatipindura ne rudo nekuzvipira.
Uye zvakadaro, nokuda kwechiitiko chinonakidza, chengeta: kana kati yako kana kati iri kugumburwa, edza kuvhara mvura kubva pombi - purr inofanira kumira pakarepo.
West Siberian Laika. Zvichemo zvezera
Mazuva mangani makati anofamba? Inguva inofamba kwenguva yakareba sei?
Postage njiva: dzinza, kutarisira, kudzidziswa
Ndezvipi zvirwere zvembwa
Mabhuku akakurumbira evana - Makuru makuru ezvinotyisa mabhuku ezvipfuwo
Salads nyore kupfuura maminitsi 5 uye uri kuitwa
SEC "Golden Bhabhironi" musi Prospekt Mira
Pepper varinamire mu osteochondrosis pamusoro remuromo musana: apo guruu, contraindications, wongororo
Zvinogona electric munda, ukama huri pakati simba uye zvinogona
Catarrhini aro subtypes
Hamuzivi sei kuti iwe kubata navo? Tichazvidudzira!
Book "Sherlock Holmes" kuitira. tsanangudzo pfupi mabasa
Ruzvelt Franklin: Biography, nyika, basa. President Roosevelt nevakadzi
Macalorie ari chokoreti zvihwitsi Vangani? Diet chokoreti
Herbs uremu - chaivo munzira dzose!
Vangani mbira nyemba mu anovava ruomba?
5 mushroom muviri. Tsika "Zvishanu maparera mushroom"